Nhau - Aluminium foil matepi ausina kumboshandisa
Aluminium foil matepi ausina kumboshandisa
Kana zvasvika kune aluminium foil tepi, ndinotenda isu tese tinofanira kuziva nayo, sezvo ichiwanzoonekwa muchikamu chemidziyo yemumba.
Chekutanga pane zvese, aruminiyamu foil tepi inogadzirwa neyakaomerera kumanikidza-inonamira, pamwe nehunhu hwealuminium foil yakakwira tembiricha yekudzivirira, isingagone, saka ine yakanaka kwazvo yekuvhara maitiro, asi zvakare ine inoratidzira zvimiro, muhupenyu hwedu, ovhoni, microwave hovhoni dzinozoiswa ku. Ehe, panewo akawanda mafomu muindasitiri yemotokari.
Pazasi iwe unowana mashoma eakakosha ealuminium foil zvigadzirwa.
(A) Yakajairwa yakarongedzwa / isina kusarudzika aruminiyamu foil tepi
Ichi chigadzirwa chigadzirwa chakajairika pamusika, viscosity yakanaka, kuputira kwakanaka, yemagetsi inodzivirira basa. Inonyanya kushandiswa kumagetsi ekudzivirira magetsi emhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvemagetsi, uye kupisa kwekushisa mumidziyo yemumba neyekutengesa.
(B) Imwe uye yakapetwa kaviri-simbi aluminium pepa tepi nekusimbisa
Ichi chigadzirwa chinhu chinoumbwa negirazi fiber furu yekusimbisa pakati pealuminium pepa uye kraft bepa, iro rine mashandiro eakajairika aruminiyamu foil tepi, asiwo isingaite mvura, mold-proof uye kupisa kuputira. Iyo inoshandiswa kuputira pombi, kunze kwekudzivirira kwemidziyo yekudziisa uye yekutonhodza, uye kupisa kupisa kwezvivakwa nemahotera.
(C) Girazi fiber aruminiyamu pepa tepi
Ichi chigadzirwa chakagadzirwa nealuminium pepi uye girazi fiber jira mushure mekunamatira mukomboni, ine yakanaka mvura mhepo chipingaidzo kuita, anti-oxidation kuita, isina simba acid uye alkali kuramba, kuputika-chiratidzo uye murazvo unodzora. Iyo inowanzo shandiswa pakuisa chisimbiso mapaipi uye kuvaka inoratidzira zvidimbu mumagetsi epasi kudziya masisitimu.
(D) Murazvo unodzora aluminium pepi tepi
Anoumba kirasi murazvo retardant tepi ne yakachena aruminiyamu foil sechinhu chepasi zvinhu, guruu kuti murazvo retardant, uyezve neakanakisa kuita kwechena silicone kupatsanurwa bepa se liner rinoumba. Nesimba rakakwira peel, yakanaka yekutanga adhesion, kubatana, kwakanakisa murazvo unodzora zvivakwa. Inokodzera mweya ducts, madziro, uye simbi kuputira, pamwe nemota nechitima mota kuputira, chikepe pombi kuputira, nezvimwe.
(E) nhema pendi aluminium pepi tepi
Kuitira kune vashandi munzvimbo refu yekushanda muziso revanhu havanzwe kuneta, iyo yepamusoro vachishandisa nhema nhema. Iyo ine mashandiro ekupinza mwenje, kunzwika kwezwi, hunyoro-chiratidzo, anti-ngura, kupisa kupisa, kuchengetedza kupisa, murazvo unodzora, nezvimwe. Inonyanya kutamba chinzvimbo chekudzivirira kwekurira kwenzvimbo dzemabiko uye dzimba dzemakonzati.
(F) Aluminium-yakarongedzwa firimu tepi
Ichi chigadzirwa chakafukidzwa netaundi yealuminium foil pane iyo firimu, kupisa kwemafuta, anti-corrosion, yemagetsi inodzivirira, yakasimba tensile zvivakwa. Inonyanya kushandiswa kushongedza kwemukati, kudhinda fekitori uye mamwe mamiriro.